Puloverul DON Urban style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> wear este tricotat fn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>, iar textura sa iti va oferi con style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>fort n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> tot parcursul zilei. Cu un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> model cn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>c, puloverul DON Urban style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> wear poate fi purtat n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ute casual sau smart casual an style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>turi de un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> sacou, blugi n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> ghete.
Toamn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a vn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>e cu schimbari atat can style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>d vn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>e vorba de temn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>raturi, cat n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> can style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>d vn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>e vorba de garderoba. In style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>cet-n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>cet, trebuie sa n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>locuiesti han style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ele subtiri cu cele groase, iar propun style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>erea n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>oastra n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> look n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>rfect n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru acest sezon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> este palton style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ul bleumarn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> scurt DON Maddisson style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>. Avan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>d un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> den style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>gn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>mplu n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> masculn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>, acest palton style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> iti va oferi o n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ota de elegan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ta n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> plus de n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>rson style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>alitate. Poarta-l cu n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>credere impreun style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a cu pan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>talon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i, pulovere sau bluze de sezon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>caltamn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>te de toamn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a, iar astfel vei avea tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ute foarte stin style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>te. Modelul are n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>altimea de 1,89 m n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> greutatea de 80 de kilograme n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> poarta masura 50.
Alege buton style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ii DON Alphabet Letters n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> cu n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>guran style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ta vei fi remarcat.
Purtatorul acestui n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ume are o sen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>bilitate n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> o apreciere aparte n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru lucrurile bun style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>e, iar dn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> acest motiv am creat sn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>cial modelul DON Riccardo. Fin style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>d un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ume ce semn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ifica putere, curaj, camasa mov cu acen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ume este demn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a de orice tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>uta stin style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ta, modern style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a. In style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>drazn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>este sa ien style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> dn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> tipare n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> sa te faci remarcat! Material: 100% bumbac Modelul are n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>altimea de 1,89 m n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> greutatea de 80 de kilograme n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> are urmatoarele dimen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> camasa: M
Puloverul bleumarn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> DON Wn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ter Casual este articolul vestimen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tar preferat n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru sezon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ul rece. Cu o croian style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> modern style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> sun style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>r con style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>fortabil, el merita un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> loc de cn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ste n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> garderoba ta n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru zilele reci. Pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru ca are un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> model cn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>c, dar n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> culori "vii", il poti purta n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ute casual sau smart casual an style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>turi de un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> tricou alb ori o camasa un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i, un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> cardigan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>, blugi n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> ghete de iarn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a, spre exemplu.
Cauti sa iti n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>oiesti garderoba cu articole vestimen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tare con style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>fortabile, stin style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>te n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> calduroase? Maletele DON Maurizio sun style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t ideale n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru a fi n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>tegrate n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>utele de toamn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> de iarn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a. Fin style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>d foarte usor de asortat, ele iti vor completa n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>rfect tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>utele n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru birou sau tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>utele n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>taln style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>iri amicale sau even style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>imen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>te deosebite. Modelul are n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>altimea de 1,89 m n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> greutatea de 80 de kilograme n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> poarta masura M.
O geaca calduroasa, rezisten style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ta n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> temn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>raturi scazute, este o alegere foarte bun style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>a n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> sezon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ul rece. Geaca n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>eagra DON Cold Wear are croian style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> slim fit, un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> model modern style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> material pn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>cut n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> atn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>gere. Este calduroasa n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> poate fi purtata n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> diferite tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ute. Fin style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>d foarte versatin style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>, poti sa o porti atat n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> blugi, cat n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> pan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>talon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i Chn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>os. Opteaza cu n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>credere n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru acest model de geaca n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> mod n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>gur vei avea un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> look n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> moda sezon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ul acesta! Modelul are n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>altimea de 1,89 m n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> greutatea de 80 de kilograme n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> poarta masura M.
Iti pn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>ce sa-ti n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>treci timpul n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> compan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ia familiei sau a prieten style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ilor n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> vrei sa te n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>mti bn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>e n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> orice momen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t? Tricoul gri DON Momen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ts are o croian style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> foarte n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>mpn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>, este usor de asortat n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> poate fi purtat cu blugi sau pan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>talon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i casual. Alege-l n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> acele zile n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> care vrei sa te n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>mti con style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>fortabil n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>u vei regreta. Modelul are n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>altimea de 1,90 m n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> poarta urmatoarele dimen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>un style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i: Tricou - L
Costumul slim fit bej n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> carouri DON Rafaele este o alegere elegan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ta n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>spirata! Este n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>rfect n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>tru o tn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>uta de zi, iar acest lucru se datoreaza culorii n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> texturii. Adauga-l n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> colectia ta de costume n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> cu n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>guran style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ta vei fi multumit de alegerea facuta. Poti sa-l porti n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> even style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>imen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>te ce au loc n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> aer liber sau n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> o n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>taln style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ire. DON Rafaele exprima n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>credere de sn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>e, elegan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>ta n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> putere. Se potriveste n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">pen style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>rfect cu camasa alba DON Corn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>elio.Material: 65% viscoza, 32% poliester, 3% en style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>stan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>, captusean style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> sacou dn style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> 100% poliester Modelul are n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">in style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>>altimea de 1,85 m n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> poarta masura 52 n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> sacou n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">sin>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> masura 32 n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn> style="fon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>t-weight:bold; color:#1C88C8;">n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">lan>n style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>> pan style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>talon style="font-weight:bold; color:#1C88C8;">nn>i.